Mpanamboatra sy mpamatsy fenitra amerikana - Orinasa manara-penitra any Etazonia
Brass PEX Cold Expansion Fitting- F1960 Standard no vokatra malaza any Amerika Avaratra. Famolavolana tena tsara, mifanaraka amin'ny fametrahana miharihary sy miafina.
Vatana ara-batana: C69300 / C46500 / C37700 / varahina maimaim-poana / varahina ambany
Size: 3 / 8PEX 1 / 2PEX 5 / 8PEX 3 / 4PEX 1PEX 11 / 4PEX 11 / 2PEX 2PEX
Ny fantsom-bozaka vita amin'ny varahina no vokatra lehibe ao amin'ny orinasanay, afaka manome ODM sy OEM fantsona varahina izahay.
Size: 1/8 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
Karazan-kofehy: FIP MIP
Brass Compression Fitting USA dia ampiasaina any Amerika Avaratra ihany koa. Sodina varahina pex fantsom-baravarana mifanaraka amin'ny fantsom-panafody mampifandray haingana ny fantsom-bokotra fanamainana.
Size: 1/8 3/8 1/2 3/4
Kavina vita amin'ny varahina F1807
Brass PEX Fitting F1807 dia ampiasaina any Amerika Avaratra. Ny PEX Fitting dia be mpampiasa amin'ny rafitra fantsona PEX miaraka amin'ny ASTM F-1807 mahazatra.
Size: 3/8 '1/2' 3/4 '1' 11/4 '11/2' 2 '
Fenitra: ASTM F-1807